UMandawa Kothi, ikhaya elikude nekhaya (igumbi eli-1) - I-Airbnb
UMandawa Kothi, ikhaya elikude nekhaya (igumbi eli-1)
Igumbi elise- ihotele sinombuki zindwendwe onguRajendra
I-100% yeendwendwe zakutshanje inike uRajendra iinkwenkwezi eziyi-5 kunxibelelwano.
I-Mandawa Kothi isandula ukulungiswa kwaye yenziwe yangoku ukusuka kwi-hasili yembali ukuya kwihotele ye-boutique. Umnini hotele, uRajendra Singh, ligqala leshishini lokuhamba kwaye wayefuna ukwenza indawo apho anokwabelana ngedolophu yakhe, iMandawa, kunye neendwendwe. Le ndawo inamagumbi ama-6, ngalinye linoluhlu lwalo. Kuyenzeka ukurenta i-hayili yonke kwitheko elikhulu.
Siyathanda ukuba abantu bazenzele ekhaya kuKothi wethu. Ungajoyina umpheki wethu ekhitshini ukuze ufunde izitya zaseIndiya, okanye wenze i-yoga ngaphandle ecaleni kwedama lethu lokuqubha.
Umbuki zindwendwe ngu- Rajendra
Ndiyakuthanda ukunxibelelana neendwendwe, zalapha ekhaya nakwamanye amazwe. Ndiyavuya ukwabelana ngeengcebiso ngeendawo onokundwendwela kwingingqi okanye ilizwe, kwaye ulungiselele naluphi na uhlobo lwamava ongathanda ukuba nawo ngelixa uhlala eKothi yam.
Ndiyakuthanda ukunxibelelana neendwendwe, zalapha ekhaya nakwamanye amazwe. Ndiyavuya ukwabelana ngeengcebiso ngeendawo onokundwendwela kwingingqi okanye ilizwe, kwaye ulungiselele…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Mandawa